Nandona sy nahafaty olona: tratra rehefa nifampitadiavana ilay mpamily - ewa.mg
News - Nandona sy nahafaty olona: tratra rehefa nifampitadiavana ilay mpamily
ny zandarimaria, omaly maraina tao Androvakely-Ambohimandroso, ilay
mpamily sy ny fiara nentiny nahavanon-doza. Nenjehina noho ny
lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona ilay mpamily. Miharo
fitsoahana rehefa avy nandika lalàna ny heloka iampangana azy.
Tsiahivina fa maty vokatry ny dona mafy nahazo azy ny lehilahy
iray, ny alahady hariva teo tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany tao
Avaratsena. Maty tsy tra-drano izy ary nitsoaka avy hatrany ny
fiara taorian’izay. Nambaran’ny zandary fa 38 taona ilay namoy ny
ainy ary monina ao Andeboka-Ambohimandroso ihany. Taorian’izay,
raikitra ny fikarohana ilay fiara sy ny mpamily ka voasambotra
omaly. « Vesatra maro ny anenjehana ny mpamily satria na
inona na inona antony, tsy azo atao ny mandositra adidy ka mamela
ny olona voadona hiady irery amin’ny fahafatesana », hoy
ny fanazavan’ny Zandariamaria ao Vakinankaratra. Fantatra fa
raisin’ny zandary ao Ambohimandroso ny fanadihadiana ny raharaha
ary hatolotra ny fitsarana aorian’izay.
Ankoatra izay, nitrangana
lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona ihany koa teo
Antanambao-Talata Volonondry, ny alahady teo tokony ho tamin’ny 6
ora hariva. Voadonan’ny fiara taxi-be mampitohy ny Renivohitra sy
ny ao an-toerana ny mpirahalahy roa nandeha moto. Tranga niseho teo
amin’ny fiolanan-dalana ao Antanambao. Voadona teo amin’ny lohany
ireo lehilahy 23 sy 26 taona ka naratra mafy. « Nandeha
mafy ireo mpandeha moto ka nifatratra tamin’ilay
taxi-be », hoy ny fanazavan’ny zandary misahana ny
famotorana. Taorian’izay, nianjera tamin’ny tany ireo roa lahy avy
namangy havana ary namonjy ny Renivohitra. Mbola nentina teny
amin’ny hopitaly teny Anosy Avaratra ireo tra-doza, saingy namoy ny
ainy minitra vitsy taorian’ny nahatongavany teny. Ankehitriny, atao
andrimaso ao amin’ny zandary ao Antanambao ny mpamily ilay taxi-be.
Nogiazana avy hatrany kosa ny fiara.
L’article Nandona sy nahafaty olona: tratra rehefa nifampitadiavana ilay mpamily a été récupéré chez Newsmada.
Toy ny isan-taona. Nanafatra mpanakanto maro ireo mpikarakara lanonana any Frantsa amin’izao fetin’ny faran’ny taona sy hiarahabana ny taona vaovao izao. Ao ireo hiray sehatra fa eo koa ireo samy hanao fampisehoana amin’ny toerana samihafa. Hiara-dalana any Reinnes, ohatra, ireo mivoy ny mozika mafana ahitana an’i Vaiavy Chila, i Nina’s ary i Flahs B. Mbola ho hita ao Paris koa i Vaiavy Chila, saingy hiaraka amin’i Boy Black kosa izy. Hanafana ny faran’ny taona any Toulouse kosa Rakroots sy i Tence Mena. Eo koa ny seho an-tsehatra hataon’ny tarika AmbondronA any an-toerana ihany. Ankoatra izany, ao Paris ny alim-pandihizana hafanain’i Wawa sy i Big MJ. Hijanona eto an-tanàna Mbola ao an-dRenivohitr’i Frantsa koa ny “Masiaka 2018”, iarahan’i Dalvis sy i Nina’s, ankoatra ny seho hataon’i Tosy. Hampiara-peo hitondra ny talentany any an-toerana koa ry Luc sy Mahery ary Gothlieb miaraka amin’i Lilie sy i Inah. Tsy ho diso anjara ny seho fiderana, hiarahana amin’ny mpanakanto efa monina any ivelany, tahaka an’i Rija Rasolondraibe. Ho an’ny eto an-toerana kosa indray, nisafidy ny hanafana ny fetin’ny faran’ny taona, hijanona eto an-tanàna, ry Tsiliva, i Samoela, i Dah’Mama, i Jerry Marcos ary i Lianah sy i Stéphanie. Mbola manaraka kandidà amin’ny fampielezan-kevitra Mialoha ireo rehetra ireo, mbola any amin’ny fanafanana ny fampielezan-kevitra ny ankamaroan’ireo artista amin’izao fotoana izao. Aorian’izany vao miondrana na miomana amin’ny fiakarana an-tsehatra amin’ny fetin’ny faran’ny taona izy ireo. Synèse R. L’article Seho an-tsehatra any ivelany: mpanakanto maro hanafana ny faran’ny taona any Frantsa a été récupéré chez Newsmada.
Miroso amin’ny famoto­rana tamin’ny fahafa­tesan’ilay polisy, tany Morafenobe, tamin’ny alahady 14 jolay lasa teo, ny minisiteran’ny Filaminana anatiny. Ireo tompon’ andraikitry ny Polisim-pirenena any Maintirano no miandraikitra ny fanadihadiana, mialoha ny hiakaran’ny raharaha aty an-drenivohitra, araka ny fantatra. Na balan’ny jiolahy na balan’ny mpitandro filaminana ihany no nahafaty io polisy io, raha ny angom-baovao. L’article Fitifirana polisy est apparu en premier sur AoRaha.
Il reste trois mois et deux semaines de mandat aux membres actuels de la chambre haute. Les premières gouttes de pluie tombées ces derniers jours relancent le débat, voire la polémique sur la tenue des sénatoriales en dehors de la saison sèche. « Le scrutin doit se tenir durant la saison sèche de l’année, entre le 31 mai et le 30 novembre, sauf cas de force majeure prononcée par la juridiction compétente sur saisine de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ». Au regard de ces dispositions de l’article 52 alinéa 1er de la loi organique relative au régime général des élections et des référendums, la CENI aurait dû saisir au préalable la HCC avant de proposer au gouvernement la date du 11 décembre pour la tenue des sénatoriales. Facteur climatique. D’ailleurs, il y a eu un précédent avec les précédentes sénatoriales qui s’étaient tenues le 29 décembre 2015, c’est-à-dire en pleine saison des pluies, et pour lesquelles la CENI avait adressé une requête aux fins de constatation d’un cas de force majeure auprès de la HCC, « la seule à pouvoir accorder une dérogation ». La haute juridiction présidée par le même Jean-Eric Rakotoarisoa avait constaté et prononcé le cas de force majeure pour accéder à la demande d’organisation des élections sénatoriales durant la saison des pluies. En considérant notamment que « les élections sénatoriales sont organisées au suffrage universel indirect, avec un collège électoral restreint constitué par les conseillers municipaux ou communaux et les maires ; le facteur climatique ne devrait pas être un obstacle dirimant à l’organisation du scrutin ». Date limite. Pour les sénatoriales du 11 décembre 2020, le collège électoral est toujours constitué par les seuls maires et conseillers municipaux ou communaux, faute d’élus régionaux. Concernant le cas des communes dont le sort est lié aux requêtes en cassation auprès du conseil d’État, ce dernier va tout faire pour évacuer le contentieux relatif aux élections municipales et communales avant le 11 novembre, date limite pour la clôture de la liste des grands électeurs. De toute façon, le collège électoral ne pourra pas être au grand complet, puisque les quelques élections partielles ont peu de chance de se tenir avant le 11 décembre. Qui plus est, il n’est pas exclu que les résultats des partielles fassent de nouveau l’objet de contentieux. Echéance. Pour en revenir au scrutin du 11 décembre, le défaut de saisine de la HCC par la CENI pourrait être couvert si l’on peut dire par l’article 52 du même code électoral, qui dispose que « le scrutin se rapportant à tout mandat arrivant à terme se tient dans le respect de la date de l’échéance de celui-ci, indépendamment de la saison (…) ». La proclamation des résultats officiels des sénatoriales du 29 décembre 2015 ayant eu lieu le 22 janvier 2016, le mandat de cinq ans des élus sortants de la chambre haute expire donc le 21 janvier 2021 à minuit. Ce qui explique l’organisation des nouvelles sénatoriales en dehors de la saison sèche, comme c’était déjà le cas pour les deuxièmes tours des présidentielles du 20 décembre 2013 et du 19 décembre 2018. La saison des pluies n’a pas fait tomber à l’eau les deux scrutins, comme elle n’a pas empêché les candidats de mouiller leur chemise. R. O L’article Sénat : Fin de mandat le 21 janvier 2021 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Sénat : Fin de mandat le 21 janvier 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fanesorana fako eto Antananarivo : Sakanan’ny praiminisitra Ntsay Christian
Miaina anaty loto tanteraka ny mponin’Antananarivo Renivohitra amin’izao fotoana izao. Tsy misy manala ny fako, ary tsy vitan’ny misavovona fa efa miparitaka ivelan’ny daba-pako mihitsy ka mila hanapaka ny lalana hifamezivezen’ny mponina sy ny fiara, efa ho herinandro maromaro izao, eny amin’ireo toerana voatokana fanariana fako isaka ny faritra. Eny, fa na efa nanao antso avo sy antso mafy ho an’ny Samva, izay mpiandraikitra ny fanalana ny fako aza ny ben’ny tanànan’Anatananarivo Renivohitra, Lalao Ravalomanana, amin’ny tokony hiasan’izy ireo amin’ny fanesorana ireo fako isaka ny faritra, hatramin’izao, mbola tsy nihetsika sy nandray ny andraikiny mahakasika izany ny Samva. Maro ireo milaza ho manao “bemarina” ny eo anivon’ny Samva, ao koa ny milaza fa tsy mahalala ny andraikiny, sns. Tsy fantatry ny mponin’Antananarivo marina ny tena zava-misy ankehitriny momba ny tsy fanesorana ny fako. Marina fa andraikitry ny Samva ny manala ny fako isaka ny faritra eto Antananarivo Renivohitra, saingy ny minisiteran’ny Rano no tena tompon’antoka voalohany amin’ny fanetsehana azy ireo. Hatreto, ny praiminisitra Ntsay Christian no fototry ny olana amin’ny fahalotoan’ny tanàna. Porofon’izany ny tsy famoahany ny vola tokony hanetsehana ny Samva amin’ny fanesorana ny fako isan’andro eny amin’ireo dabam-pako manerana an’Antananarivo. Tsy fantatra mazava aloha izay tena antony tsy hamoahan’ity lehiben’ny governemanta Mapar ity ny vola voatokana ho amin’izany. Ny hany mazava fotsiny dia misy ambadika politika ity tsy fanomezan’ny praiminisitra ny vola ahafahan’ny Samva ity mihodina ara-dalàna sy manatanteraka ny adidiny, amin’ny fanalana fako. Ambadika politika satria efa mitady korontana mihitsy ry zareo Mapar, ka ny lehiben’ny governemanta mihitsy no mirotsaka an-tsehatra amin’izany. Manao izay ho afany amin’ny fambolena korontana satria rehefa misavovona ny fako ary maloto ny tanàna, tsy misy afa-tsy ny Ben’ny tanàna hatrany no voahenjika. Tsy iza anefa ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra fa vadin’ny kandidà Marc Ravalomanana. Noho izany, hoentina handemena an’ity kandidà laharana faha-25 ity izany rehetra izany. Eo ihany koa ny famoronana loto mihitsy amin’izao vanim-potoana izao mba hiparitahan’ny valanaretina pesta, mba hahafoana ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana faharoa, izay tsy ankasitrahan’ny Mapar, izay antoko misy ny praiminisitra Ntsay Christian, sns. Hita sy tsapa, araka izany, fa ny tsy hahatanteraka ny fifidianana fihodinana faharoa sy ny hisian’ny korontana no tena hifotoran’ny praiminisitra amin’izao toe-java-misy ankehitriny izao. MN L’article Fanesorana fako eto Antananarivo : Sakanan’ny praiminisitra Ntsay Christian est apparu en premier sur .L’article Fanesorana fako eto Antananarivo : Sakanan’ny praiminisitra Ntsay Christian a été récupéré chez Triatra.
Tsy nisy aina nafoy ary 109 ireo tranga vaovao
Mihena hatrany ny firongatry ny valanaretina. Tsy nisy ny lavon’ny covid-19 tao anatin’ny roa andro farany. Mijanona ho 178 ireo nodimandry noho ny coronavirus, hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty.Nidina tahaka izany koa ny isan’ireo tranga vaovao. Latsaky ny 60, miisa 50 izany ny asabotsy teo ary 59 kosa ireo nifindran’ny valanaretina, omaly alahady, tamin’ny fitiliana miisa 339. Izany hoe, miisa 109 ny fitambaran’izy ireo, tao anatin’ny 48 ora.Na izany aza, mbola lohalaharana amin’ny fahamaroan’ireo tranga vaovao ireo ny eto Analamanga. Miisa 22 izany, araka ny tatitry ny CCO, omaly, amin’ireo nifindran’ny valanaretina miisa 50. Manaraka akaiky azy eo ny any Diana, ahitana tranga vaovao miisa valo. Miisa fito ny any Menabe ary efatra any Sofia. Telo avy kosa ny any Vakinankaratra sy Amoron’i Mania. Iray avy ny any Bongolava sy Matsiatra Ambony ary iray hafa, tsy fantatra ny toerana misy azy.Ahitana « forme grave » etsy ItaosyNiakatra ho 87 kosa ireo marary mafy ka anisan’ny ahitana ireo « forme grave » raha tsy nisy izany teo aloha ny etsy amin’ny hopitalin’Itaosy, Ambatofinandrahana, Mandoto sy ny any Miarinarivo ary koa ny any Diana.Etsy an-daniny, miisa 23 ireo sitrana ka tafakatra 13 335 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana. Miisa 14 327 ireo nifindran’ny valanaretina eto amintsika ka 794 sisa ireo manaraka fitsaboana sy arahi-maso ny fahasalamany.Miisa 55 018 ny fitiliana PCR vita raha 5143 kosa ny vita eo anivon’ny fitiliana Genexpert.Synèse R. L’article Tsy nisy aina nafoy ary 109 ireo tranga vaovao a été récupéré chez Newsmada.
Kibota nivadika: mpandeha iray namoy ny ainy
Nitrangana lozam-pifamoivoizana indroa nisesy tao anatin’ny minitra vitsy ny lalan’Andilampotsy Ambatondrazaka, ny zoma hariva teo manodidina ny tamin’ny 4 ora sy sasany. Voadonan’ny moto avy ao Ambatondrazaka nihazo an’i Vohidiala ny ankizivavikely iray enin-taona niampita arabe. Vokany, naratra mafy ilay zazavavy, ireo mponina kosa, nitondra haingana azy teny amin’ny hopitaly ka voavonjy ny ainy. «Hatreto, mbola manohy ny fitsaboana izy ary efa tsy atahorana ny ainy », hoy ny fanazavan’ny zandary ao an-toerana misahana ny famotorana.Minitra vitsy taorian’izay, kibota nitondra olona efatra koa nivadika tsy lavitra teo. Vokany, lehilahy mpandeha iray manodidina ny 40 taona namoy ny ainy vokatry ny fahatapahan’ny tongony. Narata mafy nandritra ny loza ny mpamily raha tsy naninona loatra kosa ny roa hafa. « Nahita ilay fitangoronana teo amin’ilay ankizivavikely voadonan’ny moto ny mpamilin’ny kibota ka tsy nahafehy intsony ny familiana », hoy hatrany ny fanazava’ny zandary. Nambarany fa niala ireo olona marobe ny mpamily ary nilatsaka tao anaty hantsana raha saika handeha haka vato « moellon » teny amina toerana atoa hoe Lalandratsy. Henintsoa HaniL’article Kibota nivadika: mpandeha iray namoy ny ainy a été récupéré chez Newsmada.
Minisitry ny Atitany : “Tena ilaina ny mpanohitra”
“Tena ilaina ny mpanohitra, hanao arofanina. Fa aoka hanao ny asany amin’ny maha mpanohitra amin’ny maha arofanina azy izy fa tsy hanao asan’olon-kafa: ndeha hanakorontana fiainam-bahoaka, sanatria.”Io ny nambaran’ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Razafimahefa Tianarivelo, manoloana ny hetsika ataon’ny mpanohitra amin’izao fotoana izao. Raha sanatria misy korontana eto amin’ny firenena, tsy misy manana tombontsoa na ny mpanohitra na ny mpitondra, indrindra ny vahoaka malagasy.Koa aoka hisikim-ponitra hiaraka hiarina sy hanarina ny toekarena, izay hita fa niara-potika amin’ny toekarena eran-tany noho iny valanaretina Covid-19 iny. Tsy ny politika politisianina hitadiavan-toerana na ny tombontsoa kely etsy sy eroa no entina indray hanakorontanana ny fiainam-bahoaka. Mino izy fa fatra-pandala fihavanana ny Malagasy.Tsy maintsy tandrovina ny filaminam-bahoaka“Fatra-panaja izany demokrasia izany isika. Tsy baranahiny akory ny demokrasia fa demokrasianina tomponandraikitra. Samia tomponandraikitra avokoa isika rehetra, indrindra ny mpanao politika”, hoy izy ny amin’ny fitetezam-paritany ataon’ny mpanohitra hoe tatitra ho an’ny vahoaka. Ao anatin’ny vanim-potoan’ny fifidianana isika izao. Amin’ny 11 desambra ny fifidianana loholon’i Madagasikara. Tsy maintsy tandrovina ny filaminam-bahoaka mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana.“Mitodika amintsika rehetra tsy ankanavaka aho: aoka re ity politika politisianina ity tsy entina hanakorontanana fotsiny ny fiainam-bahoaka, sanatria”, hoy ihany izy. Tena mba tatitra ny zava-bita sy ny sisa ve no ataon’ny mpanohitra? Tena zavatra hafa: resaka politika ranoiray.R.Nd.L’article Minisitry ny Atitany : “Tena ilaina ny mpanohitra” a été récupéré chez Newsmada.
Tahotra fitsaram-bahoaka: maty tao amin’ny ranon’Ikopa ilay mpanendaka
Maty tra-drano! Lehilahy iray 22 taona, nangarom-paosy tao anaty taxi-be avy any Ivato no nitsoraka tao amin’ny reniranon’Ikopa, rehefa nifanenjehan’ny olona, omaly antoandro.Natahotra fitsaram-bahoaka ity mpanendaka ity ka nitsoraka avy hatrany tao Ikopa. Ny olona rahateo, efa nentin-katezerana amin’ny afitsoky ny asan-jiolahy. Nilentika avy hatrany tao anaty rano ity jiolahy ity ka tsy nipoitra intsony. Niantso ny eo anivon’ny sampana mpamonjy voina ireo fokonolona. Fotoana fohy taorian’izay, tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina niaraka amin’ny fitaovana fampiasa amin’ny famonjena olona anaty rano. Naharitra minitra vitsy ny fikarohana nataon’ny mpamonjy voina ka nampiakarin’izy ireo avy ao anaty rano ny fatin’ilay mpanendaka. Mbola hita teny aminy ny kitapo avy nendahiny tao anaty taxi-be izay nahitana telefaonina finday, vola, karatra fisariham-bola.J.CL’article Tahotra fitsaram-bahoaka: maty tao amin’ny ranon’Ikopa ilay mpanendaka a été récupéré chez Newsmada.
Niainga tamin’ny fampahafantaran’ny mpanara-maso ny fitantanambola (DGCF) ny fanadihadian’ny Bianco ny raharaha. Niafara amin’ny fampidirina am-ponja olona miisa fito noho fanahiana ny fanodinkodinam-bolam-panjakana tamin’ny tsenam-baro-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Mponina izany.Miisa 15 be izao ireo niakatra tetsy amin’ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac), 67 ha, omaly. Raharaha tamin’ny taona 2018 izao noraisin’ny Bianco, sampana Antananarivo, an-tanana, izao, tamin’ny alalan’ny DGCF, nanomboka ny 1 septambra teo.Hosoka sy fanaovana hosokaNiainga tamin’ny tatitra vola azon’ny eny Ambohibao izany. Fantatra fa ahina ny nisian’ny hosoka sy ny fanaovana hosoka. Fanodinkodinam-bolam-panjakana sy tolotra na fanomezana tsy mazava sy fanadiovam-bola « cadeaux illicites et blanchiment de capitaux »…Tale sy tompon’andraikitra ambony samihafaAnisan’ny ahina ho tsy afa-bela amin’izany fa voarohirohy amin’izao raharaha izao ny tale misahana ny vola eo anivon’ity minisitera ity tamin’ny fotoan’androny. Eo koa ireo mpitantana ny kaontimbola miisa roa « dépositaires comptables » sy ny tompon’andraikitra roa misahana ny tsenam-baro-panjakana, mpitantana iray « gestionnaire d’activités » ary ireo mpamatsy entana maromaro.Miandry ny ho tohin’ny fanadihadianaNilatsaka ny didy teo anivon’ny Pac ka fito ireo nampidirina vonjimaika am-ponja eny Antanimora ny 17 novambra teo. Ny valo kosa, nahazo fahafahana vonjimaika ary mbola miandry ny mety ho tohin’ny fanadihadiana sy ny famotorana izy ireo.Synèse R.L’article Minisiteran’ny Mponina – Fanodinkodinam-bola: tompon’andraikitra ambony fito nampidirina am-ponja vonjimaika a été récupéré chez Newsmada.
Voasambotry ny polisy tetsy Antohomadinika: sivy lahy mpifoka rongony sy mpanendaka nampikolay ny maro
Miteny ho azy ny sary. Jereo fotsiny ny endriky ry zalahy! Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny boriborintany fahefatra Isotry (CSP4), afakomaly, ireo andian-jiolahy miisa sivy mpanendaka eny Isotry hatreny Antohomadinika.Sivy lahy ry zalahy ireto niaraka amin’ny sabatra indray tratran’ireo polisy nanao fanamiana sivily teny Antohomadinika. Raha ny tatitra nampitain’ny polisy, vao 16 taona ny zandriny amin’ireo raha 21 taona kosa ny zokiny indrindra. Eny Isotry sy Antohomadinika ny tena fanaovan’izy ireo ny asa ratsiny. Mpivaro-mandeha toy ireny mivarotra kojakoja ilaina andavanandro ireny ny asan’ny sasany amin’izy ireto raha mpibata entana kosa ny hafa. Mifoka rongony izy ireo mialoha ny hanaovany ny asa ratsiny ary efa maro ireo olona noratrain’ireto jiolahy ireto. Niainga avy amin’ny fitarainana nataon’ireo olona lasibatra no nahafahan’ny polisy nitsongo dia ireto jiolahy ireto ka niafara amin’ny fahatrarana azy ireo. Marihina fa isan’ireo faritra tena mampikaikaika ny olona amin’ny lafiny fanendahana iny faritra Isotry sy Antohomadinika iny. Maro ireo efa nitondra faisana tamin’ny nafitsok’ireo jiolahy. Tokony homena ny sazy henjana izay tratra satria mijanona fotoana fohy any am-ponja ireny tontakely ireny dia miverina manohy ny asa ratsiny indray.Jean ClaudeL’article Voasambotry ny polisy tetsy Antohomadinika: sivy lahy mpifoka rongony sy mpanendaka nampikolay ny maro a été récupéré chez Newsmada.
Tontosa tamin’iny herinandro iny ny atrikasa goavana mikasika ny “Ankizy ivelan’ny sekoly” natao tao Antsirabe nandritra ny telo andro. Niompana amin’ny fampahafantarana sy fifampizarana traikefa mahakasika ny eo amin’ireo mpisetraha amin’ny fanabeazana ny atrikasa. Niarahana tamin’ireo teknisianin’ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena , ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy fanofanana arakasa, ary ny ministeran’ny Toekarena sy ny tetibola tamin’ny alalan’ny Instat izany.Tanjona ny hahafahana manofana ireo ekipa teknika nasionaly amin’ny fanangonana ireo raki-kevitra sy antontam-baovao, ary antontanisan’ny ankizy ivelan’ny sekoly eto Madagasikara nanomboka ny taona 2015. Mbola marobe ireo ankizy tsy tafiditra an-tsekoy noho ny antony maro. Eo ihany koa ny fiantraikan’ny valanaretina Covid19 nandritra ny tsy fahafahan’ny ankizy niditra an-tsekoly.Antoky ny famolavolana ny paikady hahatrarana ny « Vinan’ny fampandrosoana lovainjafy » (ODD 4) sy ny politikan’ny fitondram-panjakana amin’ny ady amin’ny tsy fahafahan’ny ankizy mandeha an-tsekoly ny fanatanterahana izany.Nanohana tamin’ny enti-manana rehetra ho fanatanterahana ny atrikasa ny Unesco, nandrindra ara-teknika kosa ny Vaomieram-pirenena malagasy ho an’ny Unesco.Tatiana A L’article Fampianarana: mbola maro ireo ankizy tsy tafiditra an-tsekoly a été récupéré chez Newsmada.